Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Jönköpings län / Tranås
Ku soo dhawaw Tranås – Waa laguu baahan yahay! Tranås oo ah degmo Småland waxeey ka mid tahay magalooyinka yaryar ee iswiidhan oo ruuntii korto, qorsheeyneeysana in ee sii korto. Hadafkeenu waxuu yahay in ahaano 20 000 oo qof sanadka 2025.
438 kiilomitir oo laba jibaaran
Linköping 74 kiilomitir
Jönköping 75 kiilomitir
Norrköping 112 kiilomitir
Waxeey degmadu ku taala meelaha Iswiidhan xiisaha leh oo weeynaanayo uuna dhow Linköping iyo Jönköping. Halkaan waxaa lagu soo bandhiga tayo nololeed oo sareeyso, jawi shirkadeed oo xoog leh iyo dabiicada bada uu dhow oo ku taalo magaalo ganacsiga caado uu leh. Uu dhawaanaanshaha shaqada, xanaanda caruurta, waxbarashada, xiisaha xilliga firaaqada iyo baashalka Tranås waxuu keenaa in waqti badan ku sii hore oo aad isticmaali kartid waxa adiga muhiim kuu ah.
Kireeysasho, iibsasho, dhisid – Tranås hab badan oo degaan lagu doorta ayaa jiro. Waxaan lee nahay dhowr badan oo milkaayaale guri oo leh guriyaal la kireeyo iyo kuwo la iibiyo.
Xafiiska-dalxiiska iyo xafiiska adeega Tranås Direkt waxeey ku wada yaalin hal goob oo ku taalo Storgatan 22 ee bartamaha. Halkaan dadka degmada soo booqdo iyo kuwa daganba dhamaantood waxeey ka helayaan adeeg xirfadeed iyo caawimaanad ku saabsan su'aalo kala duwan. Tranås waxaa joogo toobaraha-muwaadinka oo caawin karo qofka goor dhow uu soo guuray degmada. Toobaraha-muwaadinka waxaa si toos ah loogala xariraa Tranås Direkt.
Storgatan ee ku yaalo Tranås waa goob iibsi oo la jecelyahay ayadoo ee keentay taasi dukaamada, dukaamada waa weeyn, biibito raaxo leh iyo maqaayadaha. Sido kale Storgatan waxaa ku taalo maktabadeena-magaalo.
Xafiiska-dalxiiska iyo xafiiska adeega Tranås Direkt Maktabad Soo arag oo samee
Xanaanada furan waa goob kulan oo loogu tala galay dadka waa weeyn ee leh caruurta uu dhaxeeyo 0-6 sano oo lagu wada soo dhaweeynaayo. Xiliyada ee furanyihiin ee hada taagan iyo barnaamiyada waxeey ku jiraan bogga degmada. Degmada Tranås waxaa ku yaalo dugsiyaalo xanaano oo badan.
Xarunta-waxbarshada Västra Vux waxaa lagu soo dhaweeynaa dhamaan inta dhaaftay 20 sano si ee wax ugu bartaan ama raadshaan jiheeyn-waxbarasho oo laga raadinaayo waxbarashada dadka waa weeyn ee degmadeed. Ku soo dhawaaw in aad la soo xariiro jiheeynta-waxbarshada Västra Vux si aad uu hesho warbixin ku saabsan fursadaado-waxbarasho. Dugsiga dadka waa weeyn ee Sommenbygden waxuu ku yaala bartamaha Tranås, waxuuna 10 daqiiqo uu jiraa xarunta-safarka Tranås.
TUC Sweden waa shirkad gaar ah oo soo bandhigto waxbarasho sare ee xirfadeed iyo koorsooyin uu haboon shirkado oo lagu qabanaayo bey'ad waxbarasho oo qurxoon, lehna goob shireed iyo biibito. Dugsiga waxbarashada sare ee xirfada TUC waxuu ka mid yahay isku daberidaha ugu weeyn gobolka ee dhanka waxbarashada sare ee xirfadooyinka. Iskuulka waxuu ku yaala bartamaha Tranås, waxaana si sahlan ugu taga kartaa lug, baskiil, bas, tareen ama gaari. Masaafad-safareed oo ka baxsan Tranås waxaa ku taalo Jaamacada Linköping iyo Jaamacada Jönköping.
Waxbarashada dadka waaweyn Dugsiga dadka waaweyn TUC Sweden Jaamacada Linköping Jaamicada Jönköping
Tranås xarunteeda qoyska waa goob kulan looguna talogalay caruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Halkan waxaa ku wada shaqeeya degmada iyo maamulka gobolka iyadoo ujeedadu tahay in la horumariyo caafimaadka iyo horumarka. Xarunta qoyska waxaa laga helaa Daryeelka caafimadka caruurta, Daryeelka caafimaadka haweenka, Qaabilaada dhalinyarada, Hawsha Qoyska, Guddida caafimaadka ardayda Smedjan, dugsiga xanaanada ee furan iyo Talo-bixinta qoyska.
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha. Rugta qoysaska
Markii xariir lala yeelanaayo hey'addaha waxaa jirto fursad lagu helo caawinaad-turjumaan.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Tranås